Farmaajo: “Guuldarro ayuu Madaxweyne Xasan Sh. kala soo noqday Mareykanka” | Farmaajo: “Guuldarro ayuu Madaxweyne Xasan Sh. kala soo noqday Mareykanka” – Latest News
« War Deg Deg Ah: Cali Khaliif oo noqday Madaxweynaha Maamulka Khaatumo
Xisbi ka dhisan Uganda oo dowlada ka dalbaday in la sheego mudada ay Ciidamada… »
Farmaajo: “Guuldarro ayuu Madaxweyne Xasan Sh. kala soo noqday Mareykanka”
Muqdisho (GT) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka been sheegay Natiijadii ka soo baxday Shirkii Mareeykanka iyo Hogaamiyaasha Afrika, taas oo aheyd in DFS ay Guul ka soo hooysay Shirkaasi.
Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo Wareysi siiyay Idaacadda Radio Kulmiye ee Magaalada Muqdisho ayaa dhaliilay Madaxweynaha, wuxuuna sheegay in intuu Xasan Sheekh hayay Xilka, Dowladdiisu ay ku guul dareysatay Xaqiijinta Ammaanka iyo soo celinta Dhaqaalaha.
Farmaajo ayaa sheegay in DFS ay weeysay Taageeradii Mareykanka, wuxuuna sheeegay in Shacab war aan jirin loo sheegay in wax laga Xumaado ay tahay in Shacabka Soomaaliyeed been loo sheego, oo laga dhaadhiciyo wax aan jirin.
“Dalkii Ammaan kama jira, Caasimaddii Nabad ma ahan, Adiga Gurigaaga (Villa Somalia) ayaa dhow jeer lagugu soo weeraray, waxaa la dilay dhowr Xildhibaan, marka waxaa la yiri sidee Maalgalin uga hadli kartaa hadiiba aadan suggin Ammaanka Dalkaaga (…) Madaxweynuhu Jawaabtiisa waxey aheyd in Qatartaas la qaato oo la gallo risk” Ayuu yiri Farmaajo.
“Madaxda dowaldda oo uu ugu horreeyo Madaxweyne Xasan Sheekh waxay heleen fursad wanaagsan, balse ugama faa’iideysn sidii la doonayay (…) Ammaankii oo faraha kasii baxaya ma sugin, howsha kama aysan bilaabin dib u heshiisiin, dhaqaalihiina wali dhulkuu yaallaa,” ayuu yiri Farmaajo.
Sidoo kale Farmaajo ayaa ka hadlay Muranka Badda Soomaaliya ka taagan xiligaan, waxaana uu sheegay in Go’aanka Badda Soomaaliya uu u yaalo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Waa Wareysigii Labaad oo uu muddo Asbuuc gudahiisa ku dhaliilayo Madaxweynaha iyo Waxqabadka Dowladda Federaalka.